Isijobelelo esisesitayeleni esinendawo yakho yokungena kanye Nokufinyelela Ebhishi - I-Airbnb
Isijobelelo esisesitayeleni esinendawo yakho yokungena kanye Nokufinyelela Ebhishi
Solrød Strand, i-Denmark
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Laura
Siyakwamukela efulethini lethu elisanda kulungiswa futhi elithokomele eliseduze nebhishi ne-forrest. I-Solrød Strand yaziwa ngokusondelana kwayo nebhishi, i-forrest yemvelo futhi ebangeni elifushane lokushayela ukuya e-Copenhagen nase-Køge - okwenza kube indawo enhle yokuhlala lapho uvakashela i-Sjælland.
Ifulethi litholakala esihlokweni esihlukile maqondana nendlu yethu, ngakho-ke unendawo yakho enekhishi elinakho konke, indlu yokugezela, ithala nendawo yengadi. Jabulela izinsuku ezithile zokuphumula ngokuthula nokuzola.
Ikhaya lethu lisanda kulungiswa ngophahla oluphakeme kanye namaphaneli amahle omsindo wamapulangwe ase-Scandinavia kanye nezindonga zezitini ezimbili zasekuqaleni.
Jabulela i-Solrød Beach, uhambo olufushane lwemizuzu engu-2/100 m ukusuka emnyango wakho wangaphambili, kanye nokufinyelela engadini yakho yangaphambili kanye nokufinyelela endaweni yethu enkulu yokhuni. Indawo enhle yokuhlala isikhathi esifushane nokunethezekile noma ukuhlala kwebhizinisi.
I-HDTV engu-55" ene- Apple TV, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
I-Solrød Strand inesikhungo esihle kakhulu esinamathuba amaningi okuthenga ama-boutique nezindawo ezimnandi zokudla.
Intandokazi yethu siqu yindawo yokudlela yendabuko yase-Italy ebizwa ngokuthi yi-Smeralda, ene-pizza emnandi kakhulu, i-pasta kanye nama-saladi. Ukuze uthole inketho yesidlo sasemini esinobungane, sithanda i-Cafe A, enezinhlobonhlobo zokudla okumnandi kwe-cafe (yazo zonke izinhlobo).
Sihlezi sithintwa ngocingo noma nge-app ye-airbnb, uma kukhona noma yisiphi isidingo sayo :)
Hlola ezinye izinketho ezise- Solrød Strand namaphethelo